isidingo esikhulu phakathi abalandeli izilwane zasendle wajabulela ukudoba ekamu indawo ise Astrakhan esifundeni phezu loMfula iVolga nesichichimayo. Sekuyisikhathi eside Le ndawo kwaba abadumile flora zayo ocebile ezilwaneni nasezimileni. Lapha wavakashelwa abantu ukhathele ijubane bebangalasa of impilo yasedolobheni, ukuze rejuvenate uphinde ubuyisele ukulingana ngokomzwelo.
Ungathanda ukuchitha impelasonto ne izinzuzo zezempilo, ukuthola okuningi esiqala emihle? Ukudoba base "Karalat" (Astrakhan) unyaka wonke ivula iminyango yayo yokwamukela izivakashi. Abasebenzi unake is yamjabulisa ukunikela yokuhlala ukhululekile, a yokuzilibazisa enemisebenzi kanye nokungcebeleka.
Ujwayele base ukudoba
Ngo esifubeni eziyinkimbinkimbi "Karalat" (isizinda) imvelo cishe isetshenzwe izungezwe. Astrakhan - idolobha olunothile noMfula iVolga nge ingqalasizinda athuthukiswe futhi sezulu esiyingqayizivele, alinikela izimo ukhululekile for ukudoba nokuzingela ezinhle. Trophies nabo bonke-inkathi iholide kuyoletha injabulo engachazeki ukwaneliseka ngokomzwelo. Eqhubekela phambili kodoba nokuzingela eziyinkimbinkimbi, wonke umuntu uzothola okuthile kwezinhloso zenzuzo.
Nakhu kufika ibhizinisi ukuze uqondanise izikhathi ukusebenza futhi kumnandi. Ngokuvamile lapho aphethwe izenzakalo zezinkampani, okuyinto yenzelwa zokufinyelela lowo mgomo, ubunye kanye nokudidiyelwa umoya wobumbano. Base uphelele umndeni amaholide yothando. izinkampani kalula isaphulelo encane. Ayikho icala izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha ubudala.
Kukhethwa base izivakashi "Karalat" (Astrakhan) inikeza izinketho eziningana yokuhlala:
amakamelo ukhululekile kulesi sakhiwo ezintathu storey, ifakwe yokugezela, air conditioning, ifenisha, izinto zikagesi.
izindlu Fisherman - isakhiwo zokuhlala amakamelo isigaba "okuvamile". Zonke amakamelo kabusha, ifakwe ekhishini amayunithi, izakhiwo kanye ifenisha kunesidingo.
cottage Hunter sika phezu lomfula. Tabola. Amakamelo zenzelwe abantu 4. Kanti inikeza yokugezela siqu, efrijini compact, microwave, emibhedeni kanokusho. Endaweni yokwamukela izivakashi kukhona ekhishini ukupheka.
Itende idolobha - ukukhetha ephelele kubantu abafuna ukuqeda ubunye nemvelo. Ikanise ugesi, kukhona BBQ futhi izindawo wabelane endaweni.
Ngo isakhiwo main kukhona ikhefi ivulekile, ahlotshiswe isitayela asempumalanga. imenyu ngokwezifiso. Ububanzi izitsha zinhlobonhlobo: ebukhoneni izibiliboco Oriental, ephatha cuisine European futhi, yebo, nowokuzalwa izitsha Russian. Kufanele kuqashelwe ukuthi eziyinkimbinkimbi has a ipulazi encane ukwenziwa imikhiqizo yezolimo.
Futhi, izilwane ezihlala lapha: amadada, amakalikuni. Izitsha uzilungiselele kusuka imikhiqizo yemvelo ukuthi musa aqukethe ukungcola ezilimazayo kuphela. Base "Karalat" (Astrakhan) has a izoso futhi Smokehouse, lapho izivakashi ingakwazi bahlanganyele ukupheka. Izivakashi nethuba ukupheka ukudla kusukela Trophies.
Ngaphezu ikhefu eziphumulele, nibe nilindele ubuke izinkambo we expanses esikhulu iVolga. Base "Karalat" Astrakhan uhlela nemizila ku-amasayithi yendawo emlandweni futhi yokwakha esivelele esifundeni, kuhlanganise zolotaya Orda, Lotus Exige Amasimu, Salt Lake, Mausoleum Kurmangazy nokuningi.
Uhambo ngokusebenzisa izindawo eliyingqayizivele ungenza ebhasini futhi imoto yakho siqu, ephelezelwa umhlahlandlela okhokhelwayo. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka isikebhe ngokuqashisa. Ngemva kokuthi i-uhambo ezithakazelisayo ufuna uphumule, futhi lokhu kuyosisiza okugeza isiRashiya, okugeza Turkish noma sauna. Ngezinye ezokungcebeleka, ungadlala pool, thatha idiphu emfuleni, ukungcebeleka ngokusebenzisa indawo wendawo.
Kunoma sezulu uzothola ukudoba amazing kanye Spearfishing. Nale isipiliyoni kule bhizinisi ayibalulekile, ngoba usizo kufika Huntsman. Ehamba ngomfundisi abanolwazi uzokwazi ukugcwalisa ibhakede izidumbu ezinkulu. Base "Karalat" (Astrakhan) inikeza izikebhe sokuqasha, izikebhe, imishini yokudoba.
Mayelana ezihlukahlukene izakhamuzi kwamanzi, abaningi baye bezwa. Spinning awukwazi ukubamba Pike enkulu futhi iphezulu. On isihlava zingcofa kahle bream, eyikati, roach, bream, Rudd, tarashka. Amanzi "amathumba" ngokuchichima izinhlanzi ezihlukahlukene. Olwenziwe ifuna banciphise umfutho wamanzi okuzingela kwamanzi. Abakade bahambela lezi zindawo, ube umdobi iyakuthanda ukufunda futhi buya lapha futhi.
Ukudoba base "Karalat" (Astrakhan): libuyekeza holidaymakers
Isakhiwo uthola lenqwaba enjabulo ngomdlandla. izivakashi Ngenelisekile ngazwi linye ngazisa ukuthi base ingenye emakhoneni best Astrakhan esifundeni. Abantu bakhuluma nge- friendly ngisho wobungane, inkonzo izinga kanye nendawo ehlanzekile.
Ngaphandle igcwalisa amandla anikeza ukuphila, kanye nesimo Trophies womuntu generously ezinkulu. It ishiya izinkumbulo ezimnandi futhi kuthuthukisa khathizwe ngokudoba eziyinkimbinkimbi "Karalat" (isizinda). Astrakhan zokungcebeleka kwezilwandle azizimbi ngokwedlulele!
Uma izulu emhlabeni ikhona, igama kuye eCosta Rica!
Akwaziwa Dzerzhinsk sauna
Kanjani ukuze uthole eCrimea ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga? Kahle izinkomba ukushayela eCrimea
Nizhny Novgorod Conservatory Glinka: ikheli, amandla, izimo ukuqeqeshwa
Zokuhlola - kuyini?
ODG: uvula ifayela
"Amitrazin": imiyalelo ukusetshenziswa amakati nezinja